May 11, 2019 Cele Love 0
ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုသူများ ဒီနည်းလမ်း ( ၇ ) ခုကို အသုံးပြုကြည့်ပါ မိမိ ရှာနိုင်သလောက်ငွေကို မကုန်အောင်သုံးတဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) ခု…။ တန်ဖိုး ရှိလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ …။ ” ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးနိုင်ဖို့ […]
လူမဲပဲဖြစ်ဖြစ် လူဖြူပဲဖြစ်ဖြစ် သစ္စာရှိတဲ့သူမို့ ရွေးချယ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ သင်ဇာ
လူမဲပဲဖြစ်ဖြစ် လူဖြူပဲဖြစ်ဖြစ် သစ္စာရှိတဲ့သူမို့ ရွေးချယ်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ သင်ဇာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပုရိသတွေ တွေ ပါးစပ်ဖျားမှာ တသသ ခေါ်ဆိုရ လောက်အောင် အလှသတင်းကြီးတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ လက်ရှိမှာ ဆက်စီ Model နဲ့ မင်းသမီး တယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို […]
အကြောပြတ်ရာတွေကို လုံးဝပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၄)မျိုး ပျိုမေတို့မှာ အကြောပြတ်ရာတွေ အစင်းကြောင်းကြီးတွေရှိနေလို့ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလ မ်းလေးတွေကို ပုံမှန်လေးလုပ်ပေးရင် တစ်လအတွင်း ထူးခြားသိသာတဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နော် …။ (၁) Vitamin E Vitamin E မှာ […]
ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား ဆရာဝန်များ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ ဆရာဝန်ကြီးများနှင့်စမ်းသပ်ကြည့်ရာ ဆရာတော်ကြီး၏ ကျန်ရှိရုပ်ကလာပ်မှာ ထူးခြားနေသောကြောင့် မီးမသဂြိုဟ်ဘဲ ထာဝရကိုးကွယ်ထားရှိသွားမယ် လို့သိရပါတယ် ..။ ပဲခူးမြို့ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီး၏ ရုပ်ကလာပ်တော်အား အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပနမပြုဘဲ ထာဝရပူဇော်ထားရှိပါမယ် …။ ပဲခူးမြို့၊ ဗိုလ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ အောင်သုခဓမ္မရိပ်သာ […]
💦💦အရှက်တရားမှာ တားဆေးမရှိဘူး💦💦 “ဟျောင့် သားကြီး မနေ့က မင်းဖုန်းငါဆက်သေးတယ် စက်ပိတ်ထားတယ်တဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဟ” “သြော် ဒါလား မနေ့က ငါရယ် ငါ့ဆော်ရယ် တည်းခိုခန်းမှာရောက်နေလို့ ပိတ်ထားလိုက်တာ… ” “ဟာ သားကြီး စွံလှချည်လား မင်းသူ့ကို ခိုးပြေးလိုက်တာပေါ့””မင်းကလည်း ဝေးလိုက်တာ ဒီခေတ်ကြီးထဲ ဆော်ကိုခေါ်ပြီး တည်းခိုခန်းသွားနေတာတွေ […]
မြင်ရ သိရတာ စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာ ကလေးလေးရယ်..အိမ်ထဲမှာဆော့နေတုန်း ခွေးဝင်ကိုက်သွားတာတဲ့
မြင်ရ သိရတာ စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာ ကလေးလေးရယ်..အိမ်ထဲမှာဆော့နေတုန်း ခွေးဝင်ကိုက်သွားတာတဲ့ မြင်ရ သိရတာ စိတ်ထဲမကောင်းလိုက်တာ ကလေးလေးရယ်..။ ကိုယ်တွေတောင် ဒီလောက်ဖြစ်နေရင် မိဘနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ ဘယ်လောက်အထိတောင် ရင်ကျိုးလိုက်ရမလဲဆိုတာ ပြောမပြတတ်အောင်ပါပဲနော် …။ ဖေ့ပေါ်မှာ အကောင့်တစ်ခုကနေတင်ထားတာ တွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် …။ ကလေးမိဘများ သတိထားစေချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ် […]
ဒီအချက်တွေကို သိထားမှ ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေကို ချစ်ဖို့ စဉ်းစားပါ ….
ဒီအချက်တွေကို သိထားမှ ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေကို ချစ်ဖို့ စဉ်းစားပါ …. နေ့နံတွေထဲမှာ ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေဟာ စိတ်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း ကြားဖူးနားဝရှိပြီးသား ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးတွေကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထား၊ ခံစားချက်နဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူး သမီးလေးတွေကို ချစ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်နော် […]
အသားဖြူချင်သူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများ
အသားဖြူချင်သူများအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးများ အသားဖြူတာဟာမိန်းကလေးတော်တော်များများလိုလားတောင့်တတဲ့အလှအပတခုဖြစ်ပါတယ် ညိုချောတွေရှိပေမဲ့ ဖြူချောတွေလောက်သိပ်မျက်နှာမပွင့်ကြပါဘူး အသားဖြူစေတဲ့အလှကုန်တွေပေါသလို သဘာဝဖြစ်အသားဖြူနည်းတွေလဲရှိပါတယ် အသားဖြူချင်သူတွေအတွက် သိသလောက်အောက်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော် …. ။ (၁) သဘာဝဖြစ် အသားဖြူပစ္စည်းများ သဘာဝဖြစ်အသားဖြူပစ္စည်းတွေနဲ့ အသားဖြူအောင်လုပ်နည်းတွေအရင်ဖော်ပြသွားပါမယ် ကရိကထလဲမများ ဈေးလဲမကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အများသူငါလက်လှမ်းမီသုံးလို့ရတာကို ဦးစားပေးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော် …. ။ (၂) လိမ္မော်ခွံနဲ့ အသားဖြူနည်း […]
ဆံပင်ကို အံ့မခန်း အရှည်မြန်လာဖို့အတွက် လူသိနည်းသေးတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် (၅) မျိုး ဆံပင်အရှည်မြန်ချင်တာ မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်။ ဆံပင်ဟာ အရောင်ဆိုးတာ များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောက်ဆေးဖြောင့်ဆေးတွေ ထိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရှည်နှေးတာ၊ မရှည်တော့တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဆံပင်ကို အံ့မခန်း အရှည်မြန်လာစေမယ့် လူသိနည်းလျှို့ဝှက်ချက် (၅) မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ […]
မိုးမရွာလျှင် ဇွန်လအထိ မီးအလှည့်ကျသာ ပေးမည် …
မိုးမရွာလျှင် ဇွန်လအထိ မီးအလှည့်ကျသာ ပေးမည် … ပြည်တွင်းရှိ ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်သော ဆည်များအတွင်း ရေနည်းနေသဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် လျှပ်စစ်ဝန်အားလျှော့ချနေရာ မိုးမရွာလျှင် စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ဇွန်လအထိ မီးအလှည့်ကျသာ ရနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်း လျှပ်စစ်ဌာနမှ အင်ဂျင်နီယာ ဦးမျိုးသန့်အောင်က ပြောခဲ့ပါတယ် …. ။ […]